China 99.8% AgNO3 sirivheri nitrate CAS 7761-88-8 fekitari uye bhizimisi | Dzidziso
99.8% AgNO3 sirivheri nitrate CAS 7761-88-8
Chemical Zita: sirivheri nitrate
Chitarisiko: chena crystalline upfu
Molecular fomula: AgNO3
Giredhi: Electron Giredhi, Maindasitiri Giredhi, Mushonga Giredhi
Rudzi: 99.8% min
Inoshandiswa kudzora ion yekloride, uye kushanda mareferenzi esirivheri nitrate yaishandiswa kuyananisa sodium
Iyo inorganic indasitiri inoshandiswa kugadzira mamwe masalt esirivheri.
Iyo indasitiri yemagetsi inoshandiswa kugadzira zvinonamatira zvinonwisa mvura, nyowani gasi yekuchenesa vamiririri,
A8x mamorekuru sieve, sirivheri-yakarongedzwa yunifomu yekumanikidza masutu uye magurovhosi emagetsi mashandiro.
Iyo indasitiri inonamira inoshandiswa kugadzira mafotoensitive zvinhu zvakadai sefirimu firimu,
X-ray firimu uye yemifananidzo firimu.
Plating indasitiri inoshandiswa sirivheri yakanamirwa pamifananidzo yemagetsi zvinoriumba uye mamwe mabasa emaoko.
Iyo zvakare inoshandiswa zvakanyanya kune sirivheri yakanamirwa pamirazi uye inodzivirira mabhodhoro urns.
Iyo indasitiri yebhatiri inoshandiswa kugadzira sirivheri-zinc mabhatiri.
Inoshandiswa mishonga se fungicides uye mordants. Iyo indasitiri yemakemikari inoshandiswa kudhaya bvudzi uye zvichingodaro. Ongororo kemisitiri yekugadzwa kweklorini, bromine, iodicyanide uye thiocyanate.
Inoshandiswa kune cyanide yemahara yesirivha yakanamirwa pamadziro, senge sirivheri sulfuric acid yakanamirwa pamifananidzo, sirivheri hydrochloride yakanamirwa pamifananidzo, ammonium diaminodisulfonic acid sirivha yakanamirwa pamadziro, sirivheri sulfonyl salicylate yakanamirwa pamuromo semunyu mukuru.
Iyo sosi sosi yesioni. Sirivheri nitrate zvemukati zvine hunyanzvi pane iyo conductivity, kupararira
uye kunaya nekukurumidza kwesirivha yakanamirwa pamhinduro. Iyo yakajairwa muyero ndeye 25-50g / L.
Mhinduro yeammonia yesirivheri nitrate inogona kuderedzwa ne organic organic ejenti aldehydes neshuga. Naizvozvo, iri reagent yekumisikidza aldehydes neshuga. Iyo inoshandiswawo kugadziriswa kwekloride ions, kutsanangurwa kwemanganese catalyst, electroplating, kutora mifananidzo.
Muchena wekristaro poda
1kg / bhegi, 5kg / atorwa, 10kg / atorwa, 20kg / atorwa
Pashure: 95% - 99.5% Fullerene C70
Zvadaro: yakakwira inoshanda 99% Graphene
99.8% sirivheri nitrate
AgNO3 sirivheri nitrate
Mutengo Wako Palladium sulphate cas 13566-03-5 Pal ...
Mutengo wakanaka Ru 10.5% Tris (triphenylphosphine) rut ...
Mutengo wakanaka 38% Rh Rhodium trichloride powder ca ...
Mutengo wakanaka PtCl4 Platinum tetrachloride CAS 134 ...